Ndakarohwa nyoro na Headmaster ndichitsvaga nzvimbo yemwana yechikoro! - Nhau Dzevakuru
Ndakarohwa nyoro na Headmaster ndichitsvaga nzvimbo yemwana yechikoro! Taigara hedu mu Waterfalls ini na baba Shingi, ini ndiri mukadzi ane makore 27 and murume wangu ane 35 uye tine mwana mumwe achangotanga grade 1.
Murume wangu anosenza ku security and anoshanda husiku, dambudziko murume wangu haandisvire paanouya makuseni. Anenge achingonditi ndine hope ndakaneta saka izvi zvakaitika kwenguva refu dzamara ndakazo kuvara nenyere zvekuti ndaingofunga mboro chete. Nyango ndichibika kana kutsvaira ndaitota beche rese ne supu yekuda kusvirwa, ndakapedzisira ndoti nyangwe ndikataura ne murume chero kupi zvake beche rangu raizvimba masasi eharare nekubuda tumvura.
Ndakazoenda pane chimwe chikoro ndichida kunonyoresa Shingi grade 1 ndipo pandakasanga naheadmaster uno murefu mu gaint uye ari mushava ndichibva ndazviti nechemumoyo, headmaster ava munotondisvira chete. Head vakanditi nzvimbo paive pasisina nekuti ndakanonoka ndichibva ndademba demba navo ndikavati vakandiwanisa nzvimbo ndaivapa chose chavaida apo vakaseka zvavo vachiti ndozozvikwanisa here zvavaida, ndakavati hapana chandaitadza uku ndichiva nyemwerera ne ziso resviro chairo ndipo pavakanditi ndidzoke mangwana.
Mangwana acho ndakafumo geza rungwanani rwacho baba Shingi vakasvikavo samazuva ese vachibva kubasa. Ndikavabikira vakarara havo ndichibva ndakapfeka hangu mini yangu ndokubva ndarega kupfeka bhurugwa mukati semunhu aida kuteya head, ndasvika pachikoro beche rese ranzwa nekutota apa ndaitya kuti head vaigona kuramba kundisvira. Ndakanoka mu office ma headmaster zvikanzi come in, pandakapinda ndavekuda kuvhara door ndakanyepera kudonhedza mapepa andainge ndakabata ekutsvagisa nzvimbo ndichibva ndafongora ndakatarisa ku door ndichinhonga apa ndikati dako ndinaro mini yandaive ndakapfeka ndikafongora yaitoburitsa munotangira magaro chaimo
Ndakasumuka hangu ndokunanga pachair ndichiti kuna head, Goodmorng. Ha mhani shuva vanhu vechirume muri week, ndakaona head omedzera mate ndikati ndosvirwa chete nhasi. Takataura hedu asi head ziso ravo rairamba riri pandiri, vakanditi nzvimbo yaiva isati yavanikwa ndaizouya masikati ndocheka ndikaona kuti head vaive voshaya kuti vonditanga sei saka vaida kundidzosa dzosa ndikati too late ndichibva ndakasimuka pachair ndokubva ndazvidonhedza pasi ndokubata gumbo apa ndichinyepera kuti gumbo rangu head vachibva vakasimuka vachiti sorry. Dear vachiuya pandaive vakasviko ndibata mapendekete vachiedza kundisimudza vanike mboro yavo yakatomira.
Ndakavaudza kuti vabate gumbo rangu vatwasudze pachidya wanike vabata nedako apa beche rangu rainge rakazvimba uku richiyerera tumvura ndikabva ndangova bata mboro yavo, murume ane mboro iyeye ino hobvu refu, handina kunonoka kuibuditsa ndichibva ndaiti mukanwa. Ini hangu mboro ndinoyamwa, headmaster vakabowa ndakavayamwa se lollipop kusvika vaiburitsa vega mumuromo mangu ndikaona kuti vainge vapotsa vanditundira. Vakaisvotora ndokuno kiya door re office yavo vachibva vafonera secretary wavo kuti asaunze vanhu ku office kwavo, vakati nekuti vaive busy nezve basa. Pavakadzoka vakanditakura vakandigarisa patable ndokundibvisa mini dress yangu vachibva vachonjomara ndokutanga kundidya beche vachiita kusvisvina beans yenyini, akomana apa ndakabva ndakatunda.
Headmaster vakazosimuka vopfekera mboro yavo ikazara mubeche rangu rose uku ichita kudziya, head vanogona kusvira zvavo ivavo ndokubva vakatanga vachikoira mbichana mbichana uku ndichitunda muto wekuti mboro itsvedze ndokubva vakazoita increase speed. Hameno kuti ndakatunda kangani ipapo ndokubva vakazondifongoresa ndokundisvira nekumashure apo matako angu achitamba tamba ndopandakaita chikapa chemagaro manje. Ndikanzwa shasha yoshinyira ichiisa yese kusvika kuchibereko, ndakarohwa ne mboro ndikayuwira.
Iyo mboro inonaka zvayo mhani,head vaiiti kana voda kutunda vaiyibuditsa voirovera pa dako rangu voidzorera futi ndakazonzwa voita kubvunda bvunda ndikanzwa vogwinha machine gun yavo ichibudisa mabara anodziya ndakabva ndatundawo, takaita kunonzi kutundira ndakanzwa huronyo huchidziya muchibereko changu ndikati yes ndatundirwa nemutundi chaiye zvekuti pavakasvotora mboro yavo ndakabuda huronyo hunenge lacto ichiyerera nezvidya. Head vakazobvisa tie yavo kuti ndipukute huronyo hwavo kondaigopukuta nei takapfeka hedu vakanditenda zvikuru vakati vainge vagarisawo vasina kusvira sezvo mukadzi wavo ari ku UK.
Vakatora mapapers angu vakabva vapa mwana wangu nzvimbo uye vakamubhadharira fees ivo nemari yavo ndakazobuda hangu ndoenda kumba ndikasangana na baba Shingi pagate rechikoro vachitonditevera vachiti kumba kwaive nevaenzi munin’ina wake pamwe ne mudzimai wake vakanga vauya takafambidzana hedu ini ndichiyerera huronyo hwa headmaster. Tadzokera kumba ini ndaifarira kusvirwa kwandainge ndaitwa plus kuti nzvimbo yechikoro, ukuwo baba Shingi vachifarira nzvimbo yechikoro!
Dzidziso yangu kuvarume musarambe kusvira vakadzi venyu mudzimba munosvirirwa nevanogona.
Source – Masasieharare
Previous articleKusvirwa kwandakaitwa nyoro muharare neshamwari yangu!
Next articleNdakamufongoresa pamuti ndokusumudza kaskirt ndokuinyudza yese!